सोनीको कुन फोनको मूल्य कति ? (फिचर्स सहित) :: कमल नेपाल :: Setopati
सोनीको कुन फोनको मूल्य कति ? (फिचर्स सहित)
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौँ, असोज २३
विश्व टेक बजारमा चिरपरिचत नाम हो ‘सोनी’। जापानी ब्राण्ड सोनीलाई मोबाइल सेटको बजारमा पनि उत्तिकै विश्वसनीय ब्राण्डका रुपमा स्थापित मानिन्छ।
सोनीले आफ्ना स्मार्टफोनहरु ‘एक्सपेरिया’ ब्राण्डमा ल्याउने गर्छ। यस ब्राण्डको नामबाट सोनीले सन् २००८ मा पहिलो फोन ‘एक्स्पेरिया एक्स वन’ सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअघि ‘सोनी इरिक्सन’ नामको ब्राण्डबाट पनि कम्पनीले फोन बजारमा ल्याउने गथ्र्यो। तर सन् २०१२ मा दुई कम्पनीबीच ‘रि­ब्रान्डिङ’ भएपछि भने हाल एक्सपेरिया सिरिज अन्तर्गत फोनहरु बजार प्रवेश गर्ने गर्छन्।
नेपालमा पनि सोनीको बजार औसतमा मात्रै छ। नेपालमा सोनीका उत्पादनहरुलाई आधिकारिक रुपमा नेपा हिमा ट्रेड लिंकले वितरण गर्दै आएको छ। स्वदेशी बजारमा सोनीका विद्युतीय सामानहरुको विक्री निकै रहेपनि स्मार्टफोनले भने त्यसै अनुरुपको बजार बिस्तार गर्न सकेको छैन। खासगरी चिनियाँ ब्राण्डहरुको दबदबा तथा मध्यम मूल्यका फोन धेरै खोजिने यस बजारमा सोनीका ‘हाई रेन्ज’ का स्मार्टफोनहरुले राम्रो स्थान ओगट्न नसकिरहेका हुन्।
नेपा हिमाका बजार व्यवस्थापक शनि श्रेष्ठ सोनी चिनियाँ तथा अन्य ब्राण्डका फोनहरु भन्दा आफैंमा अब्बल तथा गुणस्तिरीय भएता पनि नेपालमा त्यसै अनुरुपको बजार बिस्तार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।
उनले भने, ‘नेपालको बजारमा चिनियाँ फोनको दबदबा छ। त्यसमाथि मूल्यको कोणबाट यहाँ १५ देखि २५ हजारसम्मका फोनहरु धेरै बिक्ने गर्छन्। अन्तरािष्ट्रय स्तरमै हाम्रा फोनहरु अलिक महँगा छन्। हामीसँग मध्यम रेन्जमा धेरै विकल्प छैन। त्यसैले पनि हाम्रो सेल्स आक्रामक छैन।’
यद्यपी उनले ब्राण्ड बुझेका तथा सोनी एक चोटि प्रयोग गरिसकेकाहरु भने खोज्दै आउने गरेको दाबी गरे।
बजारमा सोनीको १९ हजारदेखि ८० हजार ५ सयसम्म मूल्य भएका फोनहरु उपलब्ध छन् जसमा ‘एक्स ए’ देखि ‘एक्सजेट प्रिमियम’ सम्म अटाएका छन्। कात्तिक १२ गतेसम्म यी फोनहरुको खरिदमा आकर्षक छुट तथा उपहारको व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
यी बाहेक सोनीका अन्य मोडलका फोनहरु यस्ता छन्ः
५ इन्च एचडी कर्भड् ग्लास डिस्प्ले
एन्ड्रोइड मार्समालो ६.० भर्सन
१३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा, एलइडी फ्ल्यास, १०८० पी भिडियो रेकर्डिङ क्षमता
८ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा, ८८ डिग्री वाइड एंगल लेन्स भएको
१६ जीबी इन्टर्नल स्टोरेज, मेमोरी कार्ड मार्फत २०० जीबीसम्म बढाउन सकिने
२३०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री
मूल्य १९ हजार रुपैयाँ
एक्सपेरिया एल वन
५.५ एचडी आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले
एन्ड्रोइड ७.० नोगट भर्सन
१३ मेगापिक्सेल रियर क्यामेरा, एफ २.२ अपेचर लेन्स, एलइडी फ्ल्यास
५ मेगापिक्सेल सेल्फी क्यामेरा, एफ२.२ अपेचर लेन्स
१६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज, मेमोरी कार्डामर्फत २५६ जीबीसम्म बढाउन मिल्ने
२६२० एमएएच क्षमताको ब्याट्री
मूल्यः २० हजार रुपैयाँ
एक्सपेरिया एक्सए अल्ट्रा
६ इन्च कर्भड् ग्लास एज­टु­एज एचडी डिस्प्ले
२१.५ मेगापिक्सेल रियर क्यामेरा, एफ २.२ अपेचर लेन्स, एलइडी फ्ल्यास्, फेस डिटेक्सन, अटोफोकस
१६ मेगापिक्सेल सेल्फी क्यामेरा, एफ २.२ अपेर लेन्स, एलइडी फ्ल्यास्, अटोफोकस
३ जीबी र्याम, १६ जीबी इन्टरनल मेमोरी जसलाई २०० जीबीसम्म बढाउन सकिन्छ
२७०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री
मूल्यः २७ हजार ५ सय रुपैयाँ
एक्सपेरिया एक्सए वन
५ इन्च एचडी आइपिएस डिस्प्ले, स्क््रयाच रेसिसटेन्ट ग्लास
एन्ड्रोइड नोगट ७.० भर्सन
२३ मेगापिक्सेल रियर, एफ २.० अपेचर लेन्स, एलइडी फ्ल्यास्, फेस डिटेक्सन, अटोफोकस
८ सेल्फी क्यामेरा, एफ २.० लेन्स, अटोफोकस
३ जीबी र्याम, ३२ जीबी इन्टनल मेमोरी जसलाई कार्ड मार्फत २५६ जीबीसम्म बढाउन सकिने
२३०० एमएएच ब्याट्री क्षमता
मूल्यः २८ हजार रुपैयाँ
५ इन्च एचडी डिस्प्ले
१३ सेल्फी क्यामेरा, एफ२.० लेन्स, अटोफोकस
३ जीबी र्याम, ६४ जीबी इन्टनल मेमोरी जसलाई कार्ड मार्फत २०० जीबीसम्म बढाउन सकिने
२६३० एमएएच ब्याट्री क्षमता
मूल्यः ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ
एक्सपेरिया एक्सए वन अल्ट्रा
६ इन्च फुल एचडी आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले, स्क्र्याच रेसिसटेन्ट ग्लास भएको
५ इन्च एचडी आइपिएस डिस्प्ले, स्क्र्याच रेसिसटेन्ट् ग्लास
२३ मेगापिक्सेल रियर, एफ २.० अपेचर लेन्स, एलइडी फ्ल्यास, फेस डिटेक्सन, अटोफोकस
१६ सेल्फी क्यामेरा, एफ२.० लेन्स, अटोफोकस, एलइडी फ्ल्यास
४ जीबी र्याम, ६४ जीबी इन्टनल मेमोरी जसलाई कार्ड मार्फत २५६ जीबीसम्म बढाउन सकिने
२७०० एमएएच ब्याट्री क्षमता, फास्ट चार्जिङको सुविधा
मूल्यः ४० हजार ५ सय रुपैयाँ
५.२ इन्च एचडी आइपिएस डिस्प्ले
एन्ड्रोइड ६.० मार्समालो भर्सन
३ जीबी र्याम, ६४ जीबी इन्टनल मेमोरी जसलाई कार्ड मार्फत २५६ जीबीसम्म बढाउन सकिने
२९०० एमएएच ब्याट्री क्षमता, फास्ट चार्जिङको सुविधा
मूल्यः ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ
एक्सपेरिया एक्सजेट् एस
५.२ इन्च फुल एचडी आइपिएस डिस्प्ले, गोरिला ग्लास
एन्ड्रोइड नोगट ७.१ भर्सनको अपेरेटिङ सिस्टम
१९ मेगापिक्सेल रियर, एफ २.० अपेचर लेन्स, एलइडी फ्ल्यास्, फेस डिटेक्सन, अटोफोकस
१३ मेगापिक्सेल सेल्फी क्यामेरा, एफ२.० लेन्स, अटोफोकस
धुलो तथा पानी प्रतिरोधात्मक
फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, कम्पास, प्रोक्जिमिटी, कलर स्पेक्ट्रम सेन्सर
मूल्यः ६९ हजार रुपैंयाँ
एक्सपेरिया एक्सजेट प्रिमियम
५.५ इन्च फुलएचडी आइपिएस डिस्प्ले, कर्निङ गोरिला ग्लास ५, फोरके एचडिआर रेज्युलुसन
२३ मेगापिक्सेल रियर क्यामेरा, एफ २.० अपेचर लेन्स, एलइडी फ्ल्यास्, फेस डिटेक्सन, अटोफोकस
३२३० एमएएच ब्याट्री क्षमता, फास्ट चार्जिङको सुविधा
मूल्यः ८० हजार ५ सय रुपैयाँ
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २३, २०७४, १२:३७:५४